Inkonzo yezobuchwephesha kunye nasemva kwentengiso-iNanjing Reborn New Materials Co, Ltd.
I-Nanjing Reborn New Materials Co, Ltd ihlala ithatha ibango labathengi njengolwalathiso lweenzame, inyanzelisa "Ulawulo lokholo olulungileyo, Umgangatho wokuqala, umthengi uphakamile" njengomgaqo-nkqubo osisiseko, womeleza ukuzakhela. Kwaye sizibophelele ekuboneleleni ngenkxaso ekumgangatho ophezulu kunye negqibeleleyo yokuqinisekisa amava okuthenga amahle kubasebenzisi
Ke ngoko, sakha inkqubo emva kokuthengisa:
Ukuseka inkonzo elungileyo yasemva kwentengiso, siyathembisa ukwenza umsebenzi olungileyo wokuqeqesha abasebenzi, ukuphucula ulwazi lwabo ngemveliso, ulwazi ngenkonzo nasemva kwenkonzo yokuthengisa emva kwentengiso.
Ingcebiso yasimahla kwi-Intanethi: I-imeyile, iinkonzo zenkxaso yobuchwephesha;
Inombolo yomnxeba:0086-25 -58853060
Misela ifayile epheleleyo kumthengi ngamnye:
ukumilisela ulawulo olusemgangathweni, ukusuka kunxibelelwano lokuqala, ukuthengisa, ukuhanjiswa ukuya kusetyenziso lokugqibela, kunye nokuqinisekisa ukuba onke amanyathelo afezekile.
Bazi kakuhle abathengi:
funda iimfuno zabathengi ngenkonzo enye eyeyakho, uphendule kwiimfuno, kwaye uncede abathengi basombulule iingxaki zabo.
Kule minyaka, imakethi yemakethi iphantsi kotshintsho olukhulu, ke ixabiso lentengiso kunye nokuhanjiswa kutshintsha ngokukhawuleza. Siza kwazisa abathengi bethu kwangethuba ngezinto ezingezizo kunye nokutshintsha kwamaxabiso, ukuze babenako ukuyiqonda kakuhle imakethi, kwaye bazilungiselele kwangoko kwintengiso yexesha elizayo.
lawula umgangatho wemveliso kwimithombo eluhlaza, kwaye wenze umsebenzi olungileyo wovavanyo olusemgangathweni ngaphambi kokuhanjiswa, ukuqinisekisa ukuba imveliso iyahlangabezana neemfuno zomthengi.
Sineqela lobuchwephesha elinobuchule, elinokubonelela ngenkxaso yobuchwephesha ebanzi ngexesha. Kwaye uncede ukusombulula iingxaki kwisicelo, phucula ifomula yemveliso ukuze ufumane isiphumo.
Kwangaxeshanye, nathi sisebenzisana neYunivesithi, ukugcina ukuphucula umgangatho wemveliso, uphando kunye nokuphuhlisa iimveliso ezintsha, isicelo esitsha.
Sikwabonelela ngeenkonzo zonxibelelwano ezibanzi kuphuhliso lwangaphandle kunye nokudibana kunye nokufunyanwa kwamashishini akumgangatho ophezulu asekhaya.